Blockchain Izindaba 9 Januwari 2018 - Blockchain Izindaba
Blockchain Izindaba 9 Januwari 2018
iziqondiso Cryptocurrency ehlongozwayo Vermont
A lesishaya isimo e-Vermont uhlongoza bill ukwakha uhlaka olusha zokulawula ukusetshenziswa ubuchwepheshe blockchain.
Ngaphezu sokumjuba imibiko eminingana ku cryptocurrencies futhi blockchain, ke ephawuleka ucacisa kanjani isimo angase uhlukanise amafemu ezithile njengoba “lwemali digital Izinkampani eziphoqeleleke elinganiselwe,” ikakhulukazi labo asebenza amanethiwekhi zabo.
Labo obungenza izinkampani, uma umthethosivivinywa ivunyelwe, kuzodingeka ukhokhe “ngesimo imali yayo digital okulingana intela yokuhweba ukuze $ 0.01” noma nini iyunithi entsha cryptocurrency kudalwa, adayiswa noma idluliselwe.
“Inkampani lwemali digital isibopho sezomthetho esilinganiselwe ushwele izintela kungenjalo kusebenza” lifundza bill.
Umthethosivivinywa omusha futhi kudinga “Fintech Summit,” owawuyoletha ndawonye isimo futhi umkhakha abathintekayo ukuxoxa ukuthi Vermont kungaba akhuthaze ukusetshenziswa tech sika ebanzi. Isimo ayezonikela $25,000 ukusiza ukukhokhela umcimbi, ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi yi-Ejensi of Commerce and Development Community.
CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon ezisola ethi Bitcoin iyinkohliso
JPMorgan Chase Usihlalo & CEO Jamie Dimon ngoLwesibili sizisola amazwana adlule e anibizela Bitcoin lokukhwabanisa engqungqutheleni yasebhange Septhemba.
Ngaleso sikhathi, Dimon wathi wayengeke nomlilo JPMorgan abahwebi uma adayiswa e-mfihlo lwemali.
"I block chain ungokoqobo. Ungaba mfihlo yen futhi zamadola izinto abanjalo…"Dimon lapho kuxoxwa okukhethekile nge FOX Business.
I bitcoin kimi kwaba njalo lokho ohulumeni ndlela bazizwa Gonna mayelana bitcoin njengoba uthola elikhulu ngempela, futhi ngisanda unombono ohlukile kakhulu kunabanye abantu. Anginandaba kangako isihloko ngaso sonke.
US Federal Reserve uMongameli Bank: Bitcoin akusona nathi obuphathekayo US dollar
Bitcoin nezinye zezimali digital ungameli usongo ezisemqoka U.S. dollar, Minneapolis Fed uMongameli Neel Kashkari wathi.
“Angiboni bitcoin njengoba nathi obuphathekayo dollar ase-United States of America, futhi isizathu iyona okuvimbelayo entry kuwe ukudala uhlamvu lakho siqu futhi kimi ukudala siqu lwemali yami virtual … kungu-zero,” Wathi ngesikhathi ukubukeka zomphakathi Minnesota.
Kashkari wavuma ukuthi bitcoin nezinye cryptocurrencies kungathatha indima enkulu emhlabeni jikelele esikhathini esizayo, kodwa wathi okwamanje behlala unobuza.
“Ngakho kukhona zonke lezi alt zemali entsha idalwa nsuku zonke, futhi nakuba ungase uthi kukhona kuphela bitcoins eziningi kangaka ukuthi bazoya misela, uma Ufika kuhlangahlangene nazo zonke lezi ezinye zemali alt usengakwazi izinga lokwehla kwamandla emali, ngoba awazi ukuthi imiphi ukuthemba,” uthe. “Ngicabanga nje lokhu ibanga elide yokuya ngaphambi kokuba sazi ukuthi lokhu kuthuntuthe.
Bitcoin ikusasa lezimakethe ivuliwe zimali Thailand
Phillip Securities Thailand ukuvumele zimali Thai ukuqagela kule bitcoin nge-international nemikhiqizo global service zokuhweba, ngenkathi Thailand emakethe nabalawuli ku ukuvumelana ukuthi ukuhambisa esisemthethweni.
inkonzo enjalo inikeza bitcoin ikusasa yokuhweba Chicago Board Izinketho Exchange (CBOE) kanye Chicago Mercantile Exchange (CME).
umqondisi Ukuphatha okuphansi See Kiong wathi abanye abatshalizimali Thai unesithakazelo bitcoin futhi liyakwazi ukwamukela izingozi utshalomali esivela ikusasa.
“Ukusebenzisa bitcoin njengempahla ezihleli phezu CBOE futhi CME kuzoholela ukwamukelwa enkulu bitcoin ikusasa njengoba babe amasistimu wokukhokha futhi okuthembekile kulawulwa US Securities and Exchange Commission,” Mr okuphansi kusho umbiko wephephandaba owakhishwa e.
“Njengoba lokhu [utshalomali] mkhiqizo ngaphansi kokuqondisa umzimba zokulawula zifane, iphuzu ukukhathazeka kulesi simo akusona mayelana nokukhwabanisa noma zemali, kodwa kunalokho indlela lo mkhiqizo has izingozi okusezingeni eliphezulu,” kusho isitatimende.
UNdunankulu Prayut Chan-o-cha esanda wayala Ministry Ezezimali ukufundisa abantu ngezingozi utshalomali bitcoin.
Switzerland oluqalisa Blockchain umsebenzi amandla
Uhulumeni Swiss usethule iqembu elisha ukuqinisa nohlaka yayo zokulawula ezizungezile zokuqala blockchain futhi ICOs.
Taskforce Blockchain - oholwa nguNgqongqoshe wezeziMali Ueli Mausrer kanye nezomnotho futhi uNgqongqoshe wezeMfundo Johann Schneider-Ammann - kuhlanganisa kokubili izikhulu yombuso kanye lendawo, kanye namalungu zokuqala ahlukahlukene blockchain nabameleli zomthetho, ngokuvumelana ishidi Eqinisweni.
Iqembu iyobheka iziqondiso zomthetho ICOs kanye nezinkampani blockchain ezungeze, nengisebenza iHhovisi Likanobhala Kahulumeni Ezezimali Amazwe Omhlaba Matters - umzimba federal obhekene nasekusetjentisweni kwenchubomgomo kwezimakethe kanye simele izintshisekelo kahulumeni kwezimali kuyo yonke imingcele.
Schneider-Ammann adunyiswe iinthombe izinkampani blockchain engxoxweni ezizungezile nohlaka labo elisemthethweni.
wanezela: “Blockchain iya ngokubaluleka kakhulu njengoba ubuchwepheshe ngoba izimboni eziningi, hhayi nje ezezimali mfihlo. Into edingekayo isiqondiso ovulekile, ephumela amathuba isikhundla Switzerland ngesikhathi esifanayo sinciphisa izingozi.”
umhlangano wokuqala Taskforce Blockchain kuyoba ngomhla ka-Jan. 12, 2018.
isicelo Okokuqala silingo ngoba Mast okufakiwe
Isiphakamiso osekukade ukuletha “ngobuchule” izivumelwano smart net main bitcoin sika usanda kuthatha isinyathelo esisodwa eduzane nokwenziwa.
Onjiniyela Uthumele isicelo silingo ngoba Merkelized Abstract syntax Izihlahla (Mast), wokugubha okokuqala lokhu izinkontileka smart isiphakamiso bekulokhu isihloko isicelo silingo efuna isekuhlanganiseni ku ikhodi bitcoin sika.
Lezi izinkontileka smart yangasese ezongenza abasebenzisi ukuchaza zindlela zabo ngawo inkokhelo ngabe ukucubungula, ukunika amandla izici eziningi ukuze kubhekwe ngu zohlelo. I izinkontileka smart uyobe akhiphe bebodwa.
Inhlanganisela BIPs ngabe futhi uvumele lezi izinkontileka smart zizogcinwa ngendlela compact kwi langempela bitcoin blockchain, okusho ukuthi babengeke baphathe semali block isikhala, noma inani idatha zingagcinwa ngaphakathi block zokukhokhelwa ngamunye.
Uma onjiniyela kanye ebanzi bitcoin umphakathi uvume yoshintsho, kwakungase ukungezwa Bitcoin ngendlela ngemfoloko ezithambile.
Esicishe sibe ingxenye yenkathi 2...
Thumela Previous:Yocingo ICO izinhlelo
Thumela Landelayo:Ubani owenza umnikelo enkulu embonini mfihlo? Top 7